Who we Are - FXPRIMUS
Ka Ganacso Forex, badeecadaha (Commodities), Indices iyo CFDs Goobta ugu Ammaansan ee lagu Ganacsado
FXPRIMUS waa goobaha ganacsi ee ugu amaansan online-ka laga helo suuqa sarifyada lacagaha qalaad. Tallaabooyinkayaga dheeriga ah ee amniga ayaa na galiyay safka hore ganacsiga ( trading), waxaan hadda dejinaynaa standards cusub oo la xidhiidha amniga oo noo dhexeeya shiradaha kale ee nagula jiro suuqa sarifka lacagaha qalaad.
Adeega Aanu Bixino
Waxaan siinaa dhamaan macaamiisha kala khibradaha duwan fursado u saamaxaya inay guul ka gaaran ganacsiga online ka ah ee Forex, commodities, energies, iyo indices. Qaabkayaga guud ee aan u wada shaqeyno waa mid ka sareeya bixinta aasaasiga ah ee barnaamijka ganacsi, sida aan aaminsanahay in ganacsatada guuleysata la siiyo taageerada ugu wanaagsan ee suurta galka ah ee tacliineed, taageero farsamo iyo practical inta lagu gudo jiro hayaankooda ganacsi.
Hiigsigayagu waa in aan bixino jawi ganacsi oo online ah uguna amaansan, iyo in aan si joogto ah wax uga badalno arimaha amaanka la xiriira si aan macaamishayda usiino hababka badbaadinta ugu horumarsan shirkadaha, iyada oo la adeegsanayo labada tiir ee tiknoolajiyada & waxbarashada.
Himiladayada mustaqbalku waxay noqonaysaa mid aan shaki gali karin, bixiyaha adeega ganacsiga onlineka ah ee ugu amaansan kaas oo bixiya fulinta degdega ah ee dalabka ay ku lamaan tahay abaalmarinada iyo hal-abuurnimada suuqa ee dhamaan heerarka kala duwan ee ganacsatada.
FXPRIMUS waxay diiradda saareysaa dadaaladeeda lagu fulinayo istaraatiijadaha la qorsheeyey, si ay usiiso tayada ugu sarreysa ee suurtagal ka dhigaysa ganacsiga online ka ah. Tan waxa lagu sameynayaa iyada oo loo marayo istaraatijida saddexda afleh ee BADBAADINTA ah lana adeegsanyo TIKNOOLAJIYADA & WAXBARASHADA.
Amaanka ayaa ah udub dhaxaadka ugu muhiimsan dhamaan hawlahayaga oo idil. FXPRIMUS waa shirkadii dilaal ee ugu horreysey bilawga talaabooyinka dheeriga ah ee ka hortagga, waxayna ballanqaadeysaa inay sii horkacdo amaanka shirkadaha forex, iyadoo u maraysa cilmi baadhista tiknoolajiyada cusub oo ay sii weheliso ka hortagga khataraha baaxada weyn ee macaamiisha oo loo marayo waxbarashada. Waxaan ku hirgalina nidaamyo adag dhamaan badeecooyinka iyo adeegyada aanu bixino si aan u hubinno in macaamishayadu aanay gaarin NBP (ka hortagga in akoonku noqdo negative ama 0).
Shirkaddu waxay adeegsataa servers ku xidhan cloud oo leh isku xirnaan aad u wanaagsan adduunka oo dhan kuna lamaan tahay gelida suuqa ugu dhaqsaha badan, spreads aad u hooseyso iyo dib u dhaca ugu yar si loo xakameeyo khtarta khasaraaha aan loo baahnayn. Softwares cusub oo horumarsan kana hortagaya jabsashada, kana ilaalinaya xogta macmiilka weerarada cyberka.
Nidaamkayga guud ee waxbarashada ayaa laga dheehan karaa bixinta aasaasiga ah ee bilawga ganacsiga, maadaama aan aaminsanahay in ganacsatada guuleysta la siiyo taageerada ugu wanaagsan ee waxbarasho ahaan suurtagalka ah inta ay ku gudo jiraan hayaankooda ganacsi. Ganacsatada aqoonta leh ayaa ku qalabaysan qalabyada ka caawinaya gaarida go’aamada cilmiyaysan oo leh tayo wanaagsan iyo waqti dheer – waayo aragnimo ganacsi. Qaab cusub oo taxliilinta aasaasiga iyo farsamo ay kuu siinayaan khubarada ku talaxtagtay ee shirkada iyadoo la adeegsanayo cilmi baaris iyo hababka ganacsiga ee cusub.